teddyarpana – Page 3
1 Jul 2016 ArpanaLeaveacomment
प्रिय अशोक, रिसाएका छौ, थाहा छ मलाई। रिसाउनै पर्ने हो, तिमिलाई पूरा हक छ। यो पटक त कारण पनि छ, कुनै जानकारी बिनानै यति टाढा जो आएकी छु। तर म के गर्न सक्थी र? बाध्यता थियो। मान्छु कि मैले तिमी माथि अन्याय गरेकी छु। तर मलाई विश्वास गर, यस्तो म कदापी चाहन्नथि। मेरो सारा उमेर… Read More कथा | अन्तिम पत्र
24 Jun 2016 ArpanaLeaveacomment
जब पहिलो पल्ट देखेकी थिए; जुन दिन उसलाई भेटेकी थिए, न त हावा चलेको थियो, न त कपाल उडेको थियो, न मैले गुनगुनाएको थिए, न मनमनै गितार बजाएको थिए। बस् दिल धड्केको थियो अलि तेज गतिमा अलि द्रुत गतिमा प्रेममा पराकाष्ठा चहिएको थिएन मलाई न त महानता नै ससाना खुसिया अनि आफ्नै दुनिया साधारण सपना… Read More साचो प्रेम
18 Jun 2016 ArpanaLeaveacomment
जुन दिन मैले तपाईंलाई गुमाए; त्यहिदिन एकैसाथ गुमाए पूजनीय पिता, मैले पुज्ने देवता, प्रेरणाको श्रोत, असल दोस्त। एउटा यस्तो सत्य तितो सत्य मृत्यु र दाहसंस्कार अर्थ नै छैन रैछ गरेर त्यसको इन्कार। सबैले भन्छन् तारा हुनुभयो, स्वर्ग जानुभयो; त्यसैले त होला… ती आकाशका तारा हेर्दैछन् मानिस सारा कोहि कौसीमा गएर कोहि ओछ्यानमै भएर हेर्दिन म… Read More चम्किलो तारा
16 Jun 2016 17 Jun 2016 ArpanaLeaveacomment
This is the excerpt foraplaceholder post. It can be deleted, or edited to make it your own.… Read More Blog post title
16 Jun 2016 ArpanaLeaveacomment